आर्थिक रुपान्तरण विना देश विकास हुन सक्दैन
आर्थिक रुपान्तरण विना देश विकास हुन सक्दैन	By कल्पना शर्मा on	१ फाल्गुन २०७१, शुक्रबार १०:३०
· आर्थिक, व्यक्तित्व
अनिल केशरी शाहप्रमुख कार्यकारी निर्देशक, मेगा बैंक
महिलाहरुले आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई अहिले उच्च नै मान्नुपर्छ । महिलाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेहरु धेरै छन् । मेरो आमाले सन् १९५० मा लोकसेवा आयोगबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्न सुरु गर्ने बेलामा महिलाहरु धेरै कम थिए । तर मेरो आमाको संघर्षलाई मैले बच्चैदेखि हेर्दै आएको छु । यस्तै संघर्षबाट उहाँ पहिलो महिला राजदूत पनि हुनुभयो । यसैकारण मेरो दृष्टिकोण फरक छ । मैले जहिले पनि आमा बूवाले सँगै काम गरिरहेको देखेकाले महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन । हाम्रो बैंकमा पनि म पछि २ जना सिनीयर महिलाहरु नै हुनुहुन्छ ।
हामीकहाँ महिला भन्ने वित्तिकै आमा भन्ने बुझिन्छ । आमाको काम भनेको घरैमा बस्ने, खाना पकाउने, सबैको हेरविचार गर्ने व्यक्तिकारुपमा हेरिन्छ । हामी अधिकांसको मान्यता भनेको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण संकुचित छ । हामी त्यहि अवस्थामा रहन बाध्य छौं । तर अहिलेको अवस्था भनेको विस्तारै मेरो परिवारमा जस्तै हुँदै गईरहेको छ । साँच्चै भन्दा अहिलेको जेनेरेसनमा पुरुष, महिला भन्ने केहि भिनन्ता देख्दिन म । नत महिला म आफै कमजोर छु भन्ठान्छन् नत पुरुषले महिलालाई कमजोर नै ठान्दछ । हरेक क्षेत्रमा पुरुष जत्तिकै महिला सक्रिय छन् । आर्थिक अवस्था पनि उनीहरुको राम्रो हुँदै गईरहेको छ ।
अहिलेको जनेरेसनमा खासै असमानता छैन । झण्डै ५०÷५० प्रतिशत महिलाहरु सहभागी छन् । अवसर नपाएको पनि म मान्दिन । अब आउने दिनहरु कठिन हुन सक्छन् तर अहिलेको अवस्थामा भने महिलाहरुलाई अवसर पाउन केहि कठिन भएतापनि अवसर दिन नखोज्ने भन्ने मलाई लाग्दैन । महिला पुरुष असमान व्यबहार हुनुका पछाडि पुरुषको मात्रै नभई महिलाको पनि बराबरी हात छ । महिलाहरु चुलोचौकोमा नै रमाउन खोज्ने भएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । हामीकहाँ विशेषगरी महिलाहरुलाई घरको काम गर्ने व्यक्तिकारुपमा लिने गरिन्छ । अर्कोतर्फ महिलाले काम गरेर कमाएको पैसा सित्तिमित्ति पुरुषले प्रयोग गर्न चाहँदैनन् । यसो गर्दा आफू महिला भन्दा कमजोर भएको महशुस गर्दछन् । तसर्थ हरेक पक्षबाट महिलाले पछाडि पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यो एउटा पक्ष हो ।
अर्को पक्ष भनेको महिलाहरुको उत्साहजनक अवस्था हेर्दा अब महिलाहरु कुनैपनि पक्षबाट कम छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हाम्रो पुरुषवादी समाज भएकाले पनि जुनसुकै क्षेत्रमा पुरुषहरु नै हावी हुन खोज्ने अवस्था पनि छ । यसबाट अघि बढ्न चाहने महिलाले कहिलेकाहिं अवसर नपाउने अवस्था पनि हुन सक्छ तर पनि पहिलाको भन्दा अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति निकै उत्साहजनक छ । हाम्रोजस्ता देशहरुमा विशेषगरी पुरुषको तुलनामा महिलाहरुको अवस्था निकै जटिल छ । विहान उठेदेखि रातीसम्म महिलाहरु पुरुषको तुलनामा कयौं गुणा बढी काम गर्छन् । काम गरेर जस नपाउने एउटा कुरा हो । तर मरी मरी काम गर्ने हामीकहाँ महिला नै हुन । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो घर होस् वा बाहिर कामका लागि तयार हुने महिलाहरु नै हुन्छन् । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ की हामीकहाँ महिलाहरु कति प्रेसरमा काम गर्न बाध्य छन् भनेर । अमेरिकामा पनि महिलाहरु बाहिर निस्कन थालेको पहिलो विश्व युद्ध पछि नै हो । जव पुरुषहरु युद्धका लागि बाहिर जान थाल्छन् अनि मात्रै महिलाहरु अगाडि आएका हुन । तर अहिले त महिलाहरु चाहेर वा नचाहेरै भएपनि काम गर्न थालेका छन् । यतातिर महिलाले समयअनुसार हरेक स्थानमा पुरुषसँग बराबरी हुनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर घरायासी काममा समेत समय दिनु परिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेको नेपालमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना नभएरै हो । यदि हाम्रो नेपालमा नै बसेर रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने भए बालवच्चा र परिवार छोडेर कोहि पनि विदेश जाँदैन । त्यस्तै महिलालाई पनि आफ्नो श्रीमान् छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान कहाँ मन हुन्छ र ?
मेरो बुवा डब्लूएचओको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो र आमा पर्यटनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले मलाई बाल्यकालदेखिनै राम्रोसँग थाहा छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिवारमा के वितिरहेको हुन्छ भनेर । म ९ वटा विभिन्न मुलुकमा पढ्ने शिलशिलामा पुगेको थिएँ । कहिले बुवासँग त कहिले आमासँग । मेरो समयमा त एकदमै कम थियो तर अहिले त लगभग हरेकजसो घरबाट कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा गएकै हुन्छ । म कहिले बुवासँग कहिले आमासँग बस्दाखेरि धेरैले तिम्रो बुवा आमाको डिभोर्स भएको हो भनेर सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो । अभिभावकसँग त म कहिले पनि सँगै बसेको छैन । अभिभावक सँगै नहुँदाको जीवन साँच्चै कष्टकर हुन्छ । त्यसमाथी सन्तानले आफ्ना बाबूआमासँगै बस्न नपाउनु झनै दुखद हुन्छ ।
हामीले अहिले राजनीतिक रुपान्तरण नै सबैथोक हो भनिरहेका छौं । तर आर्थिक रुपान्तरण विना देश विकास हुन सक्दैन । राजनीतिक रुपान्तरण भयो भने के पट्रोलको लाईन कम हुन्छ ? राजनीतिक रुपान्तरणले के एयरपोर्टको लाइन कम हुन्छ ? त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउनेतिर लाग्ने हो । यसका लागि ५ वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ति भनेका कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, हाइड्रो, सेवा र जनशक्ति नै हुन । यी खम्बाहरुमा ध्यान दिन सक्ने हो भने आर्थिक छलाङ मार्न सकिन्छ । यी पाँचवटै क्षेत्रमा लाग्ने हो भने देश विकास टाढा छैन । यदि कृषिमा क्रान्ति गर्ने हो भने हामी किसान हुनुलाई पनि गर्वकारुपमा लिन्छौं । गोरुले हैन ट्रयाक्टरले जोत्ने हो भने कृर्षिमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको आर्थिक अवस्था उन्नत बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । सम्पादकसँगकाे कुराकानीमा आधारित